Iindaba -Zeziphi iindidi zemoto ezilula ukuzicoca?
Izinto ezahlukeneyo kunye neepropathi zemata emethini zinendlela ezahlukeneyo zokuhlamba.
Ubulukhuni bokuhlamba kukwahlukile, iimethi zemoto ngoku ziqhelekile ngezi zinto: ikhaphethi, iimethi zemoto zerabha, iimethi zemoto zepvc kunye neTPE / TPR iimethi zemoto.
Masicacise ukuba yintoni eyahlukileyo kwindlela yokuhlamba iimethi zemoto:
Ikhaphethi yemoto : uninzi lwevenkile yeemoto luza kunika ikhaphethi kunye nemoto xa uyithenga, iyakulunga iimoto, kwaye ijongeka intle ekuqaleni, kodwa emva kweenyanga ezimbalwa, iyakungcola kakhulu, kwaye kunzima ukuyicoca ngokucacileyo , ayinamanzi, kwaye kufuneka ulinde ukuba yome ukuze uyibuyisele emotweni yakho, akukho lula ukuyenza.
5D I-PVC yesikhumba semata yemigangatho yemotoIyathandwa kangangeminyaka, kuba ulusu lukhangeleka lukhuhla lweemoto, luyathandwa ngabanini bemoto kule minyaka idlulileyo.lunqunyiwe kwaye luthungiwe ngeemodeli zemoto, ke ngoku lulungile ngokulingeneyo kwimoto kwaye inokuvelisa kwi-MOQ ephantsi, isikwe nje ngomatshini kwaye ithungiwe ngumsebenzi, yonke imveliso yeemethi zemoto inokuvelisa zonke iimodeli zemoto. Kodwa i-PVC yesikhumba semata kulula ukuyikhupha ivumba elinetyhefu kubushushu behlobo, kwaye iya kuqhekeka emva kokuyihlamba ngamanye amaxesha. Bambalwa abantu abayisebenzisayo ngoku.
Imethi yemoto yerabha, eyona nto iluncedo kakhulu lixabiso eliphantsi, kwaye ungayisika ukuze ilungele imoto yakho, kodwa le nto ayihambelani nokusingqongileyo, kwaye emva kokuba uyisebenzise ezinye iinyanga, iya kuqhekeka, incangathi, iqine, ithambe, umgubo, ibala, ukungunda, iya kujongeka imdaka kakhulu. Ke asicebisi ukuba sisebenzise le nto yemathiriyeli yomgangatho wemoto ngoku.
Izinto ezintsha zokukhusela indalo TPE, TPR zisetyenziswa ngokubanzi kwimethi yemoto. Kwaye akukho phunga kubushushu obuphezulu, inokuphinda isebenze, anti-isiliphu, ukunxiba okunganyangekiyo, iimpawu ezingangeni manzi. Ngenxa yokuba izinto ze-TPE azidingi nayiphi na iarhente eyongezelelweyo.
Kwaye i-TPE yeemoto zemoto uyilo lwe-3D, inombhalo ngaphezulu iya kuphucula amandla okuxubana kunye necala eliphezulu elijikelezileyo linokuthintela ukuvuza kwamanzi, kukhusele imoto ngaphakathi. Isiphene semethi yemoto ye-TPE Ngaba kufuneka sikhulise ukungunda kwinqwelo nganye eyahlukeneyo, kuya kuthatha ixesha elide kwaye kubize kakhulu ukuyiphuhlisa. Ukuba ungayifumana imethi yemoto oyifunayo kwimpahla ye-TPE kwintengiso, ungathandabuzi ukuy-odola, ngokuqinisekileyo uya kuyithengisa kakhulu.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, i-TPE kunye ne-TPR iimethi zemoto kulula ukuzicoca kwaye kufaneleke kakhulu kwiintsapho ezinabantwana, akukho nto iyingozi kwimpilo.
Uya konga ixesha lokuhlamba i-TPE yemoto, ifuna kuphela imizuzu emi-2 yokuyihlamba icoceke ngokupheleleyo.
I-TPE iimata zemoto zezona moto zilula ezicocekileyo.
Ixesha Post: Feb-09-2021
Uyisebenzisa njani imethi yakho yomgangatho wemoto ye-20 ewe ...